१० बुँदे सहमतिपछि डा. केसीले तोडे अनसन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
प्रकाशित : कार्तिक १, २०७४ १८:२९
डा. केसी र प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता, माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता
केसीले आजै अनसन तोड्ने
काठमाडौं — चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै १३ औं पटक अनसनरत डा. गोविन्द केसी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच केहीबेर अघि टेलिफोन वार्ता भएको छ । प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन मार्फत डा. केसीको माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि डा. केसीले आजै अनसन तोड्ने सम्भावना छ ।
माथेमा आयोगको प्रतिवेदनको भावना अनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक पास गर्नुपर्ने माग राख्नै अनसनरत केसीले संसदको म्यान समाप्त भएपछि डा. केसीले अध्यादेशमार्फत विधेयक पास गर्न माग गरेका छन् । आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्रीले डा. केसीसँग टेलिफोन वार्ता गरेका थिए ।
डा. केसीले १३ औं अनसन थालेको आज १४ दिन पुगेको छ ।